1 MPANJAKA 22.29-40 F.6 | Fitandremana Ankadifotsy
1 MPANJAKA 22.29-40 F.6
TANTERAKA NY TENIN’ANDRIAMANITRA!
Nampiasa hafetsena i Ahaba (29-33). Ny mpanjaka rehetra dia samy mahay fa ny paikady tsara indrindra handresena ny fahavalo dia ny famelezana ny mpitarika. Fantatr’i Ahaba izany ka nody ho olon-kafa izy tsy ho fantatra hoe mpanjaka. Inona tokoa no niseho? Nifatratra tany amin’i Josafata ny miaramila Syriana. Raha tsy olona nahitsy teo anatrehan’Andriamanitra i Josafata dia maty nisolo ny toeran’i Ahaba. Azo lazaina fa efa maty paika koa ny planin’i Ahaba. Tandremo ny fiaraha-miasa amin’ny olona tsy matahotra an’Andriamanitra fa tsy ny soa ho anao mihitsy akory no tadiaviny fa ny hanapotika anao. Miaro ny olona matahotra sy mino ary manao ny sitrapony kosa nefa ny Tompo.
Tsy azo fitahina Andriamanitra (34-36). Zana-tsipika nalefa kitoatoa no nahavoa an’i Ahaba. Misy tanan’ny Tompo izay mitarika iny zana-tsipika iny ho tonga any amin’izay nikendrena azy. Tsy nahafantatra an’i Ahaba ho mpanjakan’Isiraely ity mpandefa zana-tsipika ity fa Andriamanitra kosa nahalala hoe Ahaba io. Mahavariana an! Aiza no hiafenanao an’Andriamanitra. Hoy ny Salamo 18.26:
“Ny madio no isehoanao fa madio; ary ny mpiolakolaka no isehoanao fa lalin-tsaina”. Ny voa sy ny fo dia voadiniky ny Tompo. Ianao mihevitra ny ho fetsifetsy fa Izy kosa mandeha amin’ny fahitsiana ary mamaly anao araka izany. Tandremo ary!!!
Tanteraka izay voalahatra (37-40). Maty i Ahaba satria efa izay no lahatra ho azy. Tanteraka ilay nolazain’i Elia tao amin’ny sahan’i Nabota. Raha te handositra ny fitsaran’Andriamanitra dia ny fifonana sy ny fibebahana ihany no lalana ary manaiky an’i Jesoa ho Tompo sy Mpamonjy satria Izy no nitondra ny faharatsiana rehetra teo amin’ny hazofijaliana.